Muxuu yahay cudurka ‘ay basasha sababtay’ ee ka dillaacay Mareykanka?
Bakhaarrada raashinka iyo khudaarta laga iibsado ee dalka Mareykanka ayaa dib suuqyada uga saaraya basashii ay horay usoo galiyeen, kaddib markii ay soo baxday cabsi ku saabsan in basashaas ay sababtay cudurka salmonella oo ay ilaa hadda la xanuunsadeen in ka badan 600 oo qof.
1-dii bishii August, bakhaarka lagu magacaabo Thomson International ayaa dalbaday in dib loogu soo celiyo bashasha guduudan, tan jaallaha ah iyo midda cad ee uu suuqyada 50-ka gobol ee Mareykanka iyo Canada soo galiyay tan iyo 1-dii bishii May.
Kiisaska cudurka Salmonella, oo ah xanuun ay sababto bakteeriyada, ayaa laga soo tabiyay 43 gobol oo ka tirsan Mareykanka iyo sidoo kale Canada.
Salmonella ayaa qofka u keeni kara shuban, qandho iyo murqo xanuun. Carruurta iyo dadka waayeelka ah ayaa aad ula xanuunsada cudurkan.
Waxaa suuragal ah in basal cudurka wadata laga iibiyay dukaamada jumlada bixiya, makhaayadaha iyo sidoo kale dukaamada tafaariiqda, sida ay sheegtay waaxda maamusha cuntada iyo dawooyinka ee dalka Mareykanka (FDA).
Bakhaarrada ugu waaweyn Mareykanka, oo ay ka mid yihiin Walmart, Kroger, Food Lion, Publix iyo Giant Eagle ayaa soo saaray codsiyo ay ku dalbanayaan in dib loogu soo celiyo basasha ama cuntooyin laga diyaariyay – sida ansalaatada iyo waxyaabo la mid ah – kuwaasoo la sheegay inay ka mid yihiin raashinka sumeysan ee cudurka wata.
Maalintii Isniinta, Bakhaarrada lagu kala magacaabo Trader Joe’s iyo Ralph, oo ku yaalla Xeebaha Galbeed ayaa sidoo kale billaabay inay basasha dib usoo ceshtaan.
Saraakiisha caafimaadka ee Canada ayaa xaqiijiyay kiisas ka badan 200 oo cudurka Salmonella, waxaana xanuunka lala xiriiriysay basasha looga soo dhoofiyay dhinaca Mareykanka.
Basasha ka baxday gudaha Canada ayaa la sheegay inaysan wax dhibaato ah qabin.
Sida laga soo xigtay waaxda xakameynta cudurrada ee Mareykanka (CDC), 85 qof ayaa isbitaallada loo dhigay cudurka salmonella, ilaa 7-dii bishan August.
Calaamadaha cudurka Salmonella ayaa dadka uu ku dhaco kasoo muuqda lix saacadood ilaa lix maalmood gudahood.
Inta badan dadka ayaa ka caafimaada iyagoo aan la daweynin, muddo afar ilaa toddobo maalmood gudahood ah. Laakiin qaar ka mid ah kiisaska daran lagu arko in bakteeriyada ay u gudubto qeybaha kale ee jirka.
“Carruurta ay da’dooda ka yar tahay shan sano, waayeelka ka weyn 65 sano iyo dadka uu difaaca jidhkoodu liito ayaa halis ugu jira inay aad ula xanuunsadaan,” ayey tidhi waaxda CDC.
Laamaha caafimaadka dadweynaha ee Mareyksanka iyo Canada ayaa baadhitaan ku billaabay waxa uu salka ku hayo cudurkan.
Saraakiisha caafimaadka ayaa shacabka kula taliyay inay qashinka ku daraan dhammaan basasha guryahooda taalla, haddii aysan hubin meesha ay ka keeneen.
Xitaa cuntada la kariyay ee basashaas ay ku jirto ayaa sababi karta in bakteeriyada ay sii fiddo. Waxay bakteeriyada ku hadhi kartaa wax kasta oo jikada yaalla dushooda.
Waxaa dadweynaha lgu boorriyay inay iska nadiifiyaan wax kasta oo ay cudurkaas kasii qaadi karaan.